Kraft Tape Series Fekitori - China Kraft Tape Series Vagadziri, Vatengesi
Mvura yakagadziriswa kraft tepi
Yakadhindwa yakasimbiswa Mvura yakamisikidzwa kraft tepi ine dispenser
Wet Mvura Kraft Pepa Tepi
Wet mvura kraft bepa tepi inonyanya kugadzirwa neye kraft bepa seyakagadzika zvinhu, uyezve yakagadziridzwa starch seyekunamatira. Inofanira kunge yakanyorova isati yagadzira zvinhu zvekunamatira. Iyo inogona kunyorwa pane kraft bepa. Iyo indasitiri inowanzozodaidzwa zvakare kunyorova kraft bepa rinonamira. Mushure mekunyorova, ine hunhu hwekunamatira kwakasimba kwekutanga, simba rakasimba, uye kupisa kwekushisa. Yayo substrate uye yekunamatira haizosvibisa nharaunda, uye inogona kudzokororwazve uye kushandiswazve neyakaiswa.